ဘယ်လိုပြောင်းလဲမူတွေ လုပ်ရင် သင့်ဘဝအတွက် အကျိုးရှိလာမလဲ? ပြောင်းလဲသင့်တာကို အနီးစပ်ဆုံးပြောပြမယ်
ဘယ်လိုပြောင်းလဲမူတွေ လုပ်ရင် သင့်ဘဝအတွက် အကျိုးရှိလာမလဲ? ပြောင်းလဲသင့်တာကို အနီးစပ်ဆုံးပြောပြမယ် (၁) ချိုးငှက်စာအိတ် ချိုးငှက်လေးပါတဲ့စာအိတ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ရင်တော့ သင့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကို ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာကို ပြောနေပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာက သင့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားဟာ တစ်ခြားလူအပေါ်မှာ ထိခိုက်စေတာမျိုးတွေ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့အပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲပြီး တစ်ခြားသူတွေအပေါ်မှာ သစ္စာစောင့်ထိန်းပါ။ ပြောရရင် သူငယ်ချင်းအပေါ်၊ မိသားစုအပေါ် နဲ့ ရည်းစားအပေါ်သစ္စာစောင့်သိပါ။ (၂) ဒင်္ဂါးစာအိတ် ဒင်္ဂါးပါတဲ့စာအိတ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ရင်တော့ သင်ဟာ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပြောင်းလဲမူမျိုး လုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာကို […]